Why I give-up? (ဘာကြောင့် အရှုံးပေးရမှာလဲ) အောင်မြင်ရေးသို့…
အောင်မြင်ချင်တဲ့ လူငယ်တွေအတွက် စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေဖြစ်ပါစေ။ -------------------------------------------------------------------------- ကြိုးစားတဲ့အခါ အမြဲသတိရပါ၊ Why I give-up? (ဘာကြောင့် အရှုံးပေးရမှာလဲ) I will never never give-up! * * * * * စင်္ကာပူမှာကျောင်း တက်တုန်းက Part-time လုပ်ရင်း ရက်ပေါင်းများစွာ ည ၃-နာရီ မှ အိပ်ခဲ့ရဖူးပေမဲ့ . . . . . နိုင်ငံခြားက ခဏတာအပင်ပန်းခံခဲ့ရတဲ့ အဲ့ဒီပညာတွေနဲ့ တစ်ဘ၀စာရဲ့ အောင်မြင်မှုတချို့ကို ယခုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီ။ * * * * * အရင်က ဆရာပေါက်စ ကျောင်းတွေမှာစသင်တော့ မင်းမှာအရည်အချင်းရှိလို့လားဆိုတဲ့ အထင်သေးခံရပေမဲ့ . . . . . အခုအချိန်မှာ လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အတူ လူပေါင်း (၃၀၀၀-ကျော်) ကို စာသင်ပေးနိုင်တဲ့ ပညာရှင်ဘ၀ကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီ။ * * * * * အခက်အခဲတချို့နဲ့ ဘ၀စတင်ချိန် သူများရဲ့အလုပ်တွေမှာ အောက်ကျစွာ အလုပ်လျှောက်ခဲ့ဘူးပေမဲ့ . . . . . ယခုအချိန်မှာတော့ အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ အများတွေကိုအလုပ်ခန့်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ဘ၀ကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီ။ * * * * * တချိန်က ကိုယ်ထက်သာတဲ့လူတွေရဲ့ အထင်သေး-အမြင်သေးတဲ့ ဘ၀ကို ဆက်ဆံခံခဲ့ရဘူးပေမဲ့ . . . . . အခုချိန်မှာ တချို့သောလူတွေရဲ့ လေးစားအားကျ အတူယူလောက်တဲ့ဘ၀ကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီ။ * * * * * ဘ၀ရဲ့အချိုးအကွေ့ လောကဓံ တွေရဲ့ကြားမှာ တိုးတက်ဖို့ အခွင့်အရေးဆိုတာ မရှိသလောက် ကြုံခဲ့ရဘူးပေမဲ့ . . . . . ယခုအချိန်မှာ ဘ၀ကို အောင်မြင်စေဖို့ အခွင့်အရေးများစွာကို ဖန်တီးပုံဖော်နိုင်ခဲ့ပြီ။ * * * * * လမ်းပျောက်နေချိန် ရည်ရွယ်ချက်မဲ့စွာ တပါးသူဆီက အကူအညီတွေကို မှီခိုခဲ့ရဖူးပေမဲ့ . . . . . ယခုအချိန်မှာတော့ လူအများစွာအတွက် လမ်းပြရင်း၊ တပါးသူတွေကို အကူအညီများစွာ ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပြီ။ ဘ၀ဆိုတာ နာကျင်လေလေ၊ တန်ဖိုးရှိလေလေပါပဲ။ အဆင်မပြေတဲ့ အခက်အခဲ ဒုက္ခတွေကို ကျေးဇူးတင်နေမိတယ်၊ အဲ့ဒီအရာတွေ ကြောင့်သာ ဒီလိုကြိုးစားရပ်တည်ဖို့ တွန်းအားတွေဖြစ်စေခဲ့တာပါ။ * * * * * ကျွန်တော်ကို အောင်မြင်စေတဲ့ အချက်တချို့ကို လူငယ်တွေ အတွက် အသုံးချနိုင်ဖို့ မျှဝေပေးထားပါတယ်။
(၁) အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါ၊ အာရုံစိုက်ပါ၊ ဦးတည်ချက်ရှိပါ၊ ယုံကြည်မှုရှိပါ။
(၂) ဆရာကောင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတွေဆီ မဖြစ်မနေချဉ်းကပ်ပါ။
၃) အရည်အချင်းရယ်၊ ခေါင်းဆောင်မှုရယ်၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုရယ်က အောင်မြင်မှုကိုပိုပြီးမြန်စေပါတယ်။
(၄) အောင်မြင်သူတွေကို အားကျအတုခိုးပါ၊ သူတို့ဆီကလေ့လာဆည်းကပ်ပြီး ကိုယ်ရဲ့စံအဖြစ်ထားပါ။
(၅) စာများများဖတ်ရင်း ဘ၀အောင်မြင်မှုအဖြေတွေကို ရှာဖွေပြီး စိတ်ဓါတ်ခွန်အားကိုနိုးကြားအောင်နေပါ။ သေချာတာတော့ အရာတိုင်း ဟာ အမြဲမရှိနေပါဘူး၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဘ၀ပုံစံတွေကို ကိုယ်တိုင်က ဖန်တီးပုံဖော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ဘ၀အတွက် အဲ့ဒီအရာတွေဟာ အရေးကြီးပြီးမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်ဆိုရင် ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံလာရင်တောင်မှ ထပ်ပြီးကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးစားရမှာသာ ကိုယ့်ရဲ့တာဝန် ပါ၊ တန်ပြန်တဲ့ ရလဒ်ကိုဘ၀ကြီးက ပြန်ပေးလာပါလိမ့်မယ်။ * * * * * ကျွန်တော် အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် ကျွန်တော်ရဲ့ ဆရာသမားတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေ၊ Corporate လုပ်ငန်းတွေရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်ပါ။ ကျွန်တော်အကြောင်းကို မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ပါ။ * * * * * ရိုးသားစွာ ၀န်ခံရရင် လူမသိတဲ့ နောက်ကွယ်မှာနေချင်ခဲ့တာ ကျွန်တော်ဆန္ဒပါ၊ လူတွေကို ကြွားဝါတဲ့တာမျိုးမလုပ်ချင်ပဲ Low Profile နေရတဲ့ ဘ၀ကို ကျွန်တော်ပိုကြိုက်တယ်။ * * * * * ကျွန်တော် ယခု လူပေါင်း (၁၂.၀၀၀) ကျော်အသုံးပြုနေတဲ့ www.EntrepreneurSME.com ရဲ့ Founder ပါ၊ တခြား ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေက Future Myanmar ရယ်၊ နောက် BaganTrade.com မှာ အစုရှယ်ယာဝင်ပါ။ မြို့ပေါင်း (၁၇-မြို့) မှာ (သင်တန်းတွေ၊ စီးပွားရေးအကြံပေးမှုတွေ၊ ၀န်ဆောင်မှုတွေ) နဲ့အတူ ခိုင်မာတဲ့လုပ်ငန်းအဆက်အသွယ်တွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတစ်ခုကို အောင်မြင်စွာထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ * * * * * လက်ရှိ ၂၀၁၆ မှာလည်း နိုင်ငံခြားမိတ်ဖက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်တွေ များစွာတိုးချဲ့ထားပါတယ်။ ...... အရင်တုန်းက (၁-လ) လုံးရဲ့ လစာကို ကျွန်တော် အခု (၁-ရက်) တည်းမှာ ရှာနိုင်နေပါပြီ။ အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုတော့ ငွေကြေးနဲ့တော့တိုင်းလို့တော့မရပါဘူး၊ တိုင်းတာလို့မရတဲ့ တန်ဖိုးတွေ၊ ဖန်တီးမှုတွေပါနေပါလိမ့်မယ်။ (စွန့်ဦးတီထွင်မှုနှင့် စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့အင်တာဗျူးတွေကို Mizzima Media, MRTV-4, City FM, MCN, ပြည်မြန်မာ စတဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်) * * * * * ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းတွေကို ရေးသားခြင်းဟာ ကြွားဝင်ချင်တဲ့ ဆန္ဒကြောင့်မဟုတ်ပါ၊ လူငယ်တွေအတွက် စံအဖြစ် ကြိုးစားကြဖို့ အင်အားပေးခြင်း သက်သက်ပါ။ အနာဂတ်မှာ အခွင့်အရေးတွေက များလာပြီ၊ ဒါကြောင့် လက်ရှိလုပ်ငန်းတွေမှာ လူငယ်တွေနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့ သူတိုင်းကို လုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်စေချင်တာ ကျွန်တော်ဆန္ဒပါ။ ကြိုးစားတဲ့အခါ အမြဲသတိရပါ၊ Why I give-up? (ဘာကြောင့် အရှုံးပေးရမှာလဲ) I will never never give-up! ဘ၀ကို ကြိုးစားနေတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ အခက်အခဲတခုခုကြုံလာခဲ့ရင် အကိုရဲ့ ဘ၀ကိုကြိုးစားခဲ့ပုံနဲ့အတူ၊ အကိုရဲ့အားပေးမှုကို သတိရပြီး ခွန်အားတွေဖြစ်ပါစေ ညီငယ်၊ ညီမငယ်တို့။ အနာဂတ်မှာ အခွင့်အရေးတွေ များစွာရှိလာပြီ၊ ဒါကြောင့် ကြိုးစားမှုတွေကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး အောင်မြင်မှုတွေကို ဖန်တီးနိုင်ပါစေ အကိုအားလုံးနဲ့ထပ်တူ ဆုတောင်းပေးနေ လျှက်ပါ။ ဒီလိုပြောင်းလဲခြင်းကို အားလုံးလည်းလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ Change your Thinking … Change your Life ပါ! စာရေးသူ - Zin Phyo Paing (CEO, Future Myanmar - Management) (Founder, http//www.esmemm.com) စွန့်ဦးတီထွင်မှု၊ စီးပွားရေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ၀န်ထမ်းရေးရာ၊ စတော့၊ ငွေကြေး၊ ကုန်သွယ်ရေး စတဲ့ အကြောင်းအရာ (၁၀၀) ကျော်အား (အခမဲ့) ၀င်ရောက်လေ့ လာနိုင်ပါပြီ။